Mampiseho aminao ny Samsung Galaxy S6 amin'ny horonantsary | Androidsis
MWC 2015: mifandray amin'ny Samsung Galaxy S6 amin'ny horonan-tsary
Toy ny mahazatra, ny namako Alfonso de Frutos ary mpizara iray no miandraikitra anay amin'ny fampisehoana aminao ny vaovao rehetra amin'ity fanontana ny MWC ity. Ary androany dia nanakaiky ny fijoroan'i Samsung izahay asehoy anao ny Samsung Galaxy S6 amin'ny horonan-tsary.
Fitaovana iray izay Mandeha mafy izy io noho ny famolavolana sy ny famaranana kalitao. Ary i Samsung ve mandao ny polycarbonate hampiasa aliminioma amin'ny endrik'ilay mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Galaxy S, ho fanampin'ny vera misy lamosina Gorilla Glass 4. Tsy hahatratra ny fijerinay ny Samsung Galaxy S6 ve ianao?
1 Famaranana kalitao sy famolavolana mitazona ny tsipika nialohany
2 Hery sy sosona TouchWiz voatsara tsara
Famaranana kalitao sy famolavolana mitazona ny tsipika nialohany
Araka ny hitanao amin'ny lahatsarin'ny Samsung Galaxy S6, ilay mpanamboatra Koreana dia nanapa-kevitra ny hanohy ny lamin'ny endrik'ireo teo alohany, na dia misy fiovana kely aza. Azontsika atao ny milaza fa ity fitaovana ity dia mifangaro eo amin'ny Samsung Galaxy S5 sy ny Samsung Galaxy Note 4.
Ny fitaovana premium izay nananganana azy dia midika kalitao.dada ary ataovy mahafinaritra ny Samsung Galaxy S6 ny mikasika azy. Mikasika izany, tsy afaka mitsikera ny asan'i Samsung mihitsy izahay.
Hery sy sosona TouchWiz voatsara tsara
Samsung dia nanapa-kevitra ny hanome endrika manokana ny interface manokana. Amin'izany no ahitantsika palitao madio kokoa sy madio kokoa. Porofon'izany ny nampidirin'ny mpanamboatra monina any Seoul fampiharana roa monja: S Health sy S Voice.
Afaka hitantsika izany amin'ny horonantsary izay Samsung Galaxy S6 dia miasa toy ny hetahetaay ny data avy amin'ny AnTuTu dia manazava fa ny sainam-pirenena Koreana vaovao dia afaka hamindra izay lalao tsy misy olana. Raha fintinina, terminal mafy be nefa iray izay nandiso fanantenana ahy tamin'ny lafiny sasany.
Hanombohana Heveriko fa ny famolavolana ny fitohizany dia hadisoana. Samsung dia tsy maintsy manavao bebe kokoa, tsy mampiseho fiolahana mitovy foana. Eny, tiako ny famaranana ny kalitaony, saingy mitovy amin'ny fahitana izany. Ary olana iray hafa ny vidiny.
Ary etsy ankilany misy ny olan'ny bateria: fahaizan'ny 2.550 mAh toa fohy dia fohy amiko, bebe kokoa raha raisintsika ny kaonty tsy maintsy anohanany. Ho hitantsika amin'ny famakafakana mandreraka kokoa raha toa ka nahomby tamin'ity lafiny ity i Samsung.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » MWC 2015: mifandray amin'ny Samsung Galaxy S6 amin'ny horonan-tsary
MIAOOOOOOOOOOOOO! dia hoy izy:
Tsy dia misy fiovana firy!
Valio amin'i MIAOOOOOOOOOOOOO!
Ruben vegas dia hoy izy:
ny sensor an'ny tanan-tanana ihany? Io ihany S5!
Valiny amin'i Ruben Vegas
Alfonso de Frutos dia hoy izy:
hafa ny sensor, tsy mila mihetsika intsony ny rantsan-tànanao hampandeha azy.
Mamaly an'i Alfonso de Frutos
MWC 2015: Toetra roa mampiavaka ny fakan-tsary Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 Edge, mamakafaka amin'ny horonan-tsary ny finday avo lenta voalohany misy efijery miolaka roa